Ny vatofantsiky ny fiainana - Church of God Switzerland of the World
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2018-02 > Ny vatofantsika ho an'ny fiainana
Mila vatofantsara ho an'ny fiainanao ve ianao? Rivo-piainana manandrana mamely anao amin'ny fantsom-piainana? Olana ao amin'ny fianakaviana, ny fahaverezan'ny asa, ny fahafatesan'ny olon-tiana iray na ny aretina mafy mandrahona ny handroaka ny tranonao. Ny vatofantsika amin'ny fiainanao sy ny fototry ny tranonao no fanantenana azo antoka amin'ny famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy!
Tondraka ny fitsapana tianao, toy ny onja nianjera tamin'ny sambo iray. Midina ambonimbony ny ony. Ny rano nivezivezy nankany amin'ny sambo toy ny rindrina ary ny fikapohana azy ireo fotsiny - efa ela no nesorina ny tatitra toy izany ho toy ny tantsambo. Fantatrao izao: misy onja mahery. Avy eo dia tapitra ny fahatsiarovana ny fandehanana milamina amin'ny rano madio. Amin'izao fotoana izao dia misy eritreritra ihany momba ny fizotry ny famonjena. Ny fanontaniana dia hoe: tafavoaka velona sa milentika? Na izany aza, raha te-hiatrika ny tafio-drivotra ianao dia mila vatofanao mba hitazomana anao eo amin'ny toeranao. Izany dia hiaro anao tsy hikorontana amin'ny morontsiraka mangadihady.
Ny Bokin'ny Hebreo dia milaza fa misy vatofantsika, ny fanantenana azo antoka amin'ny famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy: «Tsy azo atao ny mandainga na oviana na oviana Andriamanitra, fa eto kosa no nanolorany tena tamin'ny alàlan'ny teny fikasana sy tamin'ny fianianana. Samy tsy azo ovana ireo. Tena nampahery antsika ny manao izay rehetra azontsika atao hahatratrarana ny tanjon'ny fanantenantsika izay ho avy. Io fanantenana no fialofana ho antsika; vatofantsika azo antoka sy mafy orina ho an'ny fiainantsika izay mampifandray antsika hatrany amin'ny faran'ny fitoerana masina any an-danitra, ny toerana ao ambadiky ny efitra lamba » (Hebreo 6,18: 19 Fandikana ny Genève vaovao).
Ny fanantenanao fiainana mandrakizay dia mifototra any an-danitra, izay ny rivo-piainanao dia tsy afaka hilentika ny sambonao! Mbola tonga ny tafio-drivotra ary mitroatra anao. Mamely anao ny onja, nefa fantatrao fa tsy tokony hatahotra ianao. Ny vatofantsofinao dia miorina amin'ny lanitra tsy antonona. Ny fiainanao dia voavotr'i Jesoa tenany sy ho mandrakizay! Manana vatofanao amin'ny fiainana ianao izay manome anao fitoniana sy filaminana rehefa iharan'ny mafy ny fiainanao.
I Jesosy dia nampianatra zavatra mitovy amin'ny Toriteny teo An-tendrombohitra hoe: “Izany no mahatonga ny olona rehetra izay mihaino ny teniko sy manao izany, dia tahaka ny olona maranitra izay manorina ny tranony eo amin'ny tany marivo ambony vatolampy. Ary rehefa mianjera ny rahona sy ny rano tondraka ao ary rehefa mirehitra ny rivo-doza ary mamely ny trano amin'ny heriny manontolo, dia tsy nirodana; miorina amin'ny tany be vato izy io. Fa izay rehetra mandre ny teniko ka tsy mankatò azy dia toy ny adala izay manorina ny tranony amin'ny fasika. Ary rehefa mianjera ny rahona sy ny tondraky ny rano ao ary rehefa mirehitra ny rivo-doza ary mamely ny trano amin-kery, dia nirodana io ary potika tanteraka » (Mat. 7,24-27 ny fandikana vaovao nataon'i Geneva).
Jesosy dia milazalaza ny andian'olona roa eto: dia izay manaraka azy , ary ireo izay tsy manaraka azy. Samy manorina trano tsara tarehy izy ireo ary afaka mitandro ny filaminana. Ny onja be sy ny onja dia nahatratra ny vatolampy (Jesosy) ary tsy afaka manisy ratsy ny trano. Ny fihainoana an ’i Jesosy dia tsy manakana ny orana, ny rano ary ny rivotra, manakana ny fianjerana tanteraka. Rehefa tonga ny rivotry ny fiainana dia mila fototra mafy orina amin'ny fampandehanana anao ianao.
Nanoro hevitra antsika i Jesosy tsy hoe hanorina ny fiainantsika fotsiny amin'ny fihainoana ny teniny, fa hampihatra izany. Mila mihoatra noho ny anaran'i Jesosy fotsiny isika. Mila vonona hanao ny teniny isika. Tokony hatoky an'i Jesosy amin'ny fiainana andavan'andro isika ary hino ny finoana azy. Jesosy no manome anao safidy. Lazainy izay hitranga raha tsy miantehitra aminy ianao. Ny toetranao dia mampiseho na mino azy sy matoky azy ianao.